Waxa la sheegay in bariga welega ay kooxda onag shane ka samaysatay sal dhig cidan oo ay halkaasi dhalinyaro ku tababarto tababar ciidan – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in bariga welega ay kooxda onag shane ka samaysatay sal dhig cidan oo ay halkaasi dhalinyaro ku tababarto tababar ciidan
Deegaanka oromiya gobolka walaga dagmada kiiramu waxa kooxda onag shane ee hubaysani ka samaysatay saldhig waxana ay ka bilawday halkaasi in ay dhalinyaro ku tababarto sida dadka halkaasi dagani ay sheeggeen.
Dad halkaasi ku nool oo ka codsaday wargayska in magacooda aan la soo qaadin ayaa sheegay in kooxdaasi ay saldhig ciidan ka samaysatay meel uu dhaxaysa dagmooyinka kiiramu iyo giidha oo magaalo yar oo miyi ah oo lagu magacaabo qoqofe. Waxa ay dadkaasi halkaasi ku nooli ay arkeen ayada oo dhalinyaradaasi lagu daad guraynayo sagaal bajaaj iyo shan gawadhida xamuulka ah ee loo yaqaano sini traak.
Waxa kale oo dadka halkaasi dagan ay sheegeen in meesha lagu magacaabo qoqofe xafiisyo qabale oo ku yaala iyo dugsiyada halkaasi ka jira ay baryo dhawayd laga bilaabo lagu arkay dhalinyaro halkaasi tababar ku qaadanaysa oo ay uu isticmaleen in lagu tababaro dhalinyaradasi.
Waxa kale oo ay sheegeen dadkii halkaasi ku noolaa in ay arkeen bishan tiqimt 25keedi 2014ka shakhsi ku hadlaayay af amxaariga in ay dileen kooxdasi oo ay maydkiisana dhulka jideen. Si gaar ahna weraradu waxa ayku salaysanyihiin dadka qoomiyada amxarada ah, qabale ilaa qabale in aanu uu dhaqdhaqaaqno waan awoodi kari waynay bay yidhaahdeen, waxa ay intaasi raaciyeen in dadka halkaasi ku nool ee kooxdaasi taageersani ay u qalaan xoolo oo ay ku casuumaan kooxdaasi.
Waxa kale oo ay cadeeyeen dadka halkaasi ku nooli in maamulka dagmadasi ee madaxda dagmada iyo qabaleeguba ay yidhaahdeen waxa an ka baqayna in weerar nalagu soo qaado oo ay la heshiiyeen kooxdaasi , waxa kale oo ay sheegeen dadka halkaasi ku nooli in dawladu ay ka war hayso in kooxda onag shane ay halkaasi isku balaadhisay, balse madaama wadooyinki isku xidhayay dagmada iyo qabaleeyaasha ay halkaasi u soo mari lahaayeen ay xidhan yihii waxa ay waayeen meel ay soo maraan.
Waxa ay intaasi raaciyeen in kooxdaasi ay xidheen wadooyinki uu dhaxeeyay deeganka amxaarada ilaa naqamt iyo wadadii naqamt ilaa addis ababa uu baxaysay sidaasi darteedna ay heli kari waayeen adeegyadii loo baahna ee sida cafimaadka iyo adeegyadi dhinaca dawlada ahaa. Sida oo kale wadadii uu dhaxaysay naqamt iyo bure in mudo todoba bilood ka badan ay xidhantahay xalada dhimashada ah ee soo wajahday dadkasina aany haysan wado ay kaga baxsan karaan.
Sidaasi darteedna hoyooyinka uurka leh ee ku nool dagmadaasi qabaleeyada ku yaala ay xiliga dhalmada dhakhtar laan uu dhintaan, waxa ilaa iyo xiligan xaadirka ah uu geeriyootay dhakhtar la’an iyo dhiig bax sagaal hoyooyin dagmada karamu qabaleeyada ku yaala sida ay wargayska ugu sheegeen eheladi hoyooyinkaasi geeriyooday.
Waxa kale oo uu waramay wargayska barokacayaal oo sheegay in kooxdaasi hubaysani dhibatooyinkaasi ay soo gaadhsiinayaan si ay uga badbadaan ay halkaasi ka baro kaceen in ka badan 40 kun oo barokacayaal ah oo ku sugan magalada haro addis alem oo ay ku dhibataysanyihiin, ilaa iyo xiligan xaadirka ahna wax caawimo ah in aanay ka helin dhinaca dawlada oo ay mutaysteen silic, gaajo iyo dhaawac dhinaca cilmi nafsiga ah.
Wargayska addis maleda ayaa isku dayay in ay xaalada dadkaasi baro kacayasha ah uu wax ka waydiiyo maamulaha dagmada karamu mudane Belaay Dhesaleny oo dhawr jeer tilifoonkiisa kala xidhiidhay balse madaama uu tilifoonkiisu xidhnaa wax jawaab ah in uu ka helo wuu awoodi waayay.
Waxa sida oo kale uu wargaysku isku dayay in uu xalada dadkaasi iyo cabashdooda uu wax ka waydiiyo madaxa qaybta amniga ee dagmadaasi mudane Hundhire Beyene asaguna madaama uu tilifoonkiisa qaban waayay wixii uu ka odhan lahaa xalada dadkaasi way suurtoobi wayday.
Waxa kale oo ay dadka halkaasi ku nooli sheegeen in kooxda hubaysan ee halkaasi ku sugani ay si balaadhan halkaasi uga dhaqdhaqaaqdo oo ay baryahan danbe meelaha ay qabsanayaanna ay sii balaadhanayso.
Waxa xusid mudan in dawlada degaanka oromiya ay baryahan danbe sheegeen marar badan in ay kooxda hubaysan ee onag shane si looga tirtiro degaankaasi ay hawsheeda ku jiraan.
አዲስ ማለዳ Hidhaar 4 2014 No 21
Total views : 6982442